Wararka Maanta: Talaado, Jun 4 , 2013-Madaxweynaha Kenya oo xarunta Madaxtooyada Nairobi ku Qaabilay wafdi uu Hoggaaminayo Madaxweynaha Puntland
Mas’uuliyiiinta Kenya ee wefdiga Puntland qaabilayna waxaa kamid ahaa madaxweynaha dhowaanta la doortay Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arimaha dibadda Aamino Maxamed jibriil.
Kulankan oo ka dhacay madaxtooyada Kenya (State House), ayaa ahaa mid ay labada dhinac isaga xog wareysanayeen xaaladda guud ee dalka iyo horumarradii ay Soomaaliya ka gaartey bilihii u danbeeyey dhinacyada ammaanka iyo siyaasadda.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay ka go’an tahay sidii Soomaaliya nabad iyo xasilooni loogu soo dabbaali lahaa, isagoo xusay in dowladdiisu ay kaalin mug leh ka qaadatay dadaaladii loo galay sidii ay Soomaaliya kumeel gaarnimada uga bixi lahayd.
Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa isna dhankiisa ka hadlay arimo ay kamid yihiin dhismaha maamulka Jubbaland iyo mowqifka ay Puntland ka taagan tahay, isagoo sheegay in Puntland ay taageersan tahay maamulka Jubbaland, qaabka lagu dhisayna uu yahay mid dastuurka waafaqsan.
Madaxweyne Faroole iyo wefdigiisa oo arbacadii lasoo dhaafay kasoo ambabaxay xarunta maamulka Puntland ee Garoowe, waxay sidoo kale intii ay Nairobi joogeen kulamo la qaateen xubno ka tirsan UN-ka iyo qaar kamid ah Soomaalida magaaladaas ku dhaqan.